China Boltless Shelving orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
1. Ny talantalana tsy misy bolt dia rafitra fitahirizana ara-toekarena sy azo ampiasaina, natao hitehirizana entana kely sy antonony ho an'ny fidirana amin'ny tanana amin'ny fampiharana marobe.
2. Ny singa fototra dia ahitana mitsangana, andry, ambony bracket, afovoany bracket ary metaly tontonana.
Karazana racking: Talantalana tsy misy bolt
Halalina:≤600mm Loading: 50-150kg/avo
Fampiharana: toeram-pivarotana, fivarotana lehibe, trano fanatobiana orinasa ary andrim-panjakana
Ny talantalana tsy misy bolt, araka ny anarany, dia tsy mitaky bolt amin'ny rafitra fitahirizana manontolo.Azo amboarina mora foana amin'ny mallet fingotra fotsiny izy io.Raha ampitahaina amin'ny karazana talantalana mifandray amin'ny bolt&nut, dia mitahiry fotoana betsaka amin'ny fivoriambe sy ny famotehana.
② Vidiny mora
Ny singa ao amin'ny talantalana tsy misy bolt dia tena tsotra, toy ny mitsangana, beam, bracket sisiny ary tontonana metaly, noho izany dia lafo be izany.Ho fanampin'ny singa fototra, misy fitaovana hafa ho an'ny safidy, toy ny: sisiny harato, aoriana harato, sisiny cladding, back cladding, divider, vavahadin-tserasera karavato sy ny sisa.
③ Safe sy azo itokisana, fanitarana mora
◆Miorina amin'ny singa tsotra, ny talantalana tsy misy bolt dia fitaovana azo antoka sy azo antoka, mifanaraka amin'ny fampiharana isan-karazany.
◆Ankoatra ny 2-post boltless shelving unit, Inform koa dia manome 3-post shelving unit, izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny halalin'ny lava, ary ny vidiny dia ambany kokoa noho ny famolavolana back-to-back.
2-post boltless talantalana
3-post boltless talantalana
Ny "frame" tsy misy bolt dia atambatra amin'ny fanohanana mahitsy sy ankilany, tsy misy fanamafisam-peo H sy D bracing, izay ahafahana miditra tsy misy sakana avy amin'ny lafiny efatra.Mahatonga ny fitehirizana entana sy fanangonana entana mahomby sy haingana.
teo aloha: Angle Shelving
Manaraka: Sehatra vy
Drive amin'ny Racking, Asrs Storage, Conveyor, Shuttle amin'ny lalana efatra, Carton Live, Baby Shuttle,